Ekipa fanontana | Vaovao momba ny dia
Actualidad Viajes dia tranokala Blog Actualidad. Natokana ho an'ny tranonkalantsika tontolon'ny fitsangatsanganana ary ao no arosonay ny toerana nitodiana tany am-boalohany raha toa ka mikasa ny hanome ny fampahalalana sy ny toro-hevitra rehetra momba ny fitsangatsanganana, ny kolontsaina samihafa eto amin'izao tontolo izao ary ny tolotra tsara indrindra sy ny mpitari-dalana mpizahatany. Nandritra ny taona maro dia namokatra a fitsangatsanganana podcast izay nahomby tokoa, nahatratra ny laharana voalohany amin'ny European Podcast Awards ao amin'ny sokajy Business any Espana ary ny fahefatra any Eropa tamin'ny taona 2011 ary koa ny maha-finalista azy tao anatin'ny taona maro 2010 y 2013.
Ny ekipa fanontana ao amin'ny Actualidad Viajes dia misy mpandehandeha be mpitia sy mpiorina amin'ny karazany isan-karazany faly mizara ny zavatra niainany sy ny fahalalany taminao. Raha te ho anisan'izany ianao dia aza misalasala manorata anay amin'ny alalan'ity taratasy ity.
Hatramin'ny fahazazako dia tiako ny mahafantatra toerana hafa, kolontsaina sy ny olona ao aminy. Rehefa mandehandeha aho dia mandray fanamarihana mba hahafahako mandefa any aoriana, miaraka amin'ny teny sy sary, inona no tanjoko ary mety ho an'izay mamaky ny teniko izany. Mitovy ny fanoratana sy ny fitsangatsanganana, heveriko fa samy mitondra ny sainao sy ny fonao lavitra izy roa.
Ny fizarana ny zavatra niainako eran'izao tontolo izao sy ny fanandramana hampiely ny fitiavako ny dia dia zavatra tiako. Fantaro ihany koa ny fomba amam-panao amin'ny tanàna hafa ary mazava ho azy ny traikefa nahafinaritra. Ka ny fanoratana momba ireo olana ireo, ny fanatonana izany amin'ny besinimaro, dia nahafa-po ahy.
Tiako foana ny fiteny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ka amin'ny maha mpampianatra anglisy ahy dia tiako ihany koa ny hahafantatra an'ireo fiteny na dialectika samihafa ireo. Ny fitsangatsanganana tsirairay ataoko dia fahalalana vaovao izay hotsaroako mandritra ny androm-piainako.
Nahazo diplaoma tamin'ny Doka, tiako ny manoratra sy mahita tantara sy toerana vaovao raha mbola tadidiko. Ny fitsangatsanganana dia iray amin'ny filan'ny fanahiko ary izany no mahatonga ahy manandrana mitady ny vaovao rehetra momba ireo toerana izay antenaiko hahita indray andro any.
Nilaza izy ireo fa misy karazana mpandeha maro toy ny olona eto amin'izao tontolo izao. Nandritra ny dia rehetra nataoko dia tsapako ny karazana fahalianana azontsika ihodinana, ka ao amin'ny Actualidad Viajes dia homeko anao ny fampahalalana ilainao mba hankafizanao ny fialan-tsasatrao amin'ny lafiny rehetra eto an-tany.
Heveriko fa ny fitsangatsanganana dia iray amin'ireo traikefa manankarena azon'ny olona atao ... Mahamenatra, ilaina ny vola amin'izany, sa tsy izany? Tiako ary hiresaka momba ny karazana fitsangatsanganana rehetra amin'ity bilaogy ity aho fa raha hanome lanja ny zavatra iray aho dia ireo toerana alehako ireo nefa tsy mamela vola be eny an-dalana.
Hatramin'ny mbola kely dia te-hivezivezy foana aho ary afaka niova tsikelikely. Ny toerana tiako haleha: India, Peroa ary Asturias, na dia maro hafa aza. Tiako ny mandrakitra an-tsary ny zavatra tiako ary ambonin'izay rehetra maka sary azy toa ny hoe Japoney. Tiako ny manandrana ny gastronomisialy nentim-paharazana amin'ny toerana izay tsidihiko ary mitondra ahy fomba fahandro sy fanafody vitsivitsy hatao ao an-trano ary zaraiko amin'ny rehetra.